श्रृंखलाको त्यो चर्चित भिडियो कसरी बन्यो? - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
श्रृंखलाको त्यो चर्चित भिडियो कसरी बन्यो?
कृष्ण आचार्य १३ मंसिर
‘मिस वर्ल्ड’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी सुन्दरी श्रृंखला खतिवडाको परिचय समेटिएको भिडियो यतिबेला भाइरल भइरहेकाे छ।
नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत यसको चर्चा भइरहेको छ। नोभेम्बर १६ मा अपलोड भएको सो भिडियो हालसम्म १८ लाख ८२ हजारले हेरेका छन्। १५ हजार भन्दाबढी कमेन्ट आएका छन्। युटयुबमा रहेको भिडियोमा भ्युवर बढ्ने क्रम जारी छ।
भिडियोलाई लिएर विभिन्न जिज्ञासाहरु पनि आइरहेका छन्। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता झल्किने भिडियो कहाँ–कहाँ सुटिङ भयो? कसरी तयार भयो? यसको ‘मास्टर माइन्ड’को हो?
मिस वल्र्डमा भाग लिन जाँदा आफ्नो परिचय समेटिएको भिडियो अनिवार्य बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन प्रतियोगितामा भाग लिने हरेक देशका सुन्दरीले यसरी आफ्नो परिचयात्मक भिडियो बनाउने गर्छन्। जसलाई मिस वर्ल्डमा ‘प्रतियोगी परिचय’ को रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
यस्तो भिडियो आयोजक मिस वर्ल्डले आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानलमै अपलोड गर्छन्। सुन्दरीले आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि राख्न पाउँछन्। पूर्वमिस नेपाल निकिता चन्दकले स्वयम्भूलाई लोकेशन बनाएर मिस वल्र्ड– २०१७ का लागि आफ्नो परिचयात्मक भिडियो बनाएकी थिइन्। तीन मिनेटको सो भिडियो झन्डै आठ लाखले हेरेका थिए।
यसअघिका मिस नेपालका परिचयात्मक भिडियोभन्दा श्रृंखलाको भिडियोको चर्चा फरक छ। उनको आवाजमा दम छ। भिडियोकै कारण श्रृंखलालाई मिस वल्र्डको दाबेदार मान्नेहरु पनि थुप्रै छन्। अझ भिडियोमा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता सिर्जनशील रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
वास्तवमा यो भिडियो श्रृखंलाले आफ्नै पहलमा बनाएकी हुन्। आजभन्दा झन्डै तीन महिना पहिले श्रृंखलाले अभिन भोलाई म्यासेज गरिन्। भेट्ने कुरा भयो। तत्कालै भेटवार्ता भयो। भेटमा श्रृंखलाले अभिनले तयार पारेका भिडियोहरु हेर्ने गरेको र साह्रै मन पर्ने कुरा उनले सुनाइन्। त्यसपछि मिस वल्र्डका लागि एउटा भिडियो तयार पार्ने प्रस्ताव राखिन्।
‘मलाई नेपालबारे सामान्य जानकारी मात्र होइन सिंगो नेपालको चित्र देखाउनु छ’, श्रृंखलाले भनिन्, ‘तर त्यसका लागि ५ मिनेटभन्दा बढी हुनु हुँदैन।’ श्रृंखलाले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै अभिन नेपालखबरसँग भने, ‘म एक्साइटेड भएँ। उहाँसँग काम गर्न राजी पनि।’
त्यसपछि लोकेसनको विषयमा छलफल भयो। के–कसरी काम गर्ने भन्नेमा चर्चित युट्युवर सिसान बानियाँले साथ दिए। केही दिनमा एउटा अवधारणा तयार भयो। भिडियोमा काठमाडौंसहित गोसाइकुण्डको लोकेसन राख्ने कुरा थियो। त्यसका लागि श्रृंखला, अभिनसहितको टोली गोसाइकुण्ड गयो। त्यहाँ ड्रोनको पनि प्रयोग भएको छ। ड्रोनको प्रयोगमा मनिष महर्जनले साथ दिए।
अभिनकाअनुसार सुटिङ सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भयो। गोसाइकुण्ड निकै भिड लाग्ने ठाउँ हो। त्यहाँ मौसमको कुनै भर हुँदैन। एकछिनमा छ्याङ्ग खुल्ने र एकैछिनमा बादलले छोप्ने हुन्छ। भिडियो सुटिङका दौरान यी सबै कुराले साथ दिए।
‘म श्रृंखला दिदीलाई निकै लक्की मान्छु’ अभिन भन्छन्, ‘हामीलाई त्यतिबेला प्रकृतिले निकै साथ दियो। सट लिँदा बादल लाग्ने, लाइटिङ मिल्ने आफैँ भयो ।’
यसरी काठमाडौं र गोसाइकुण्डमा गरी १२ दिनमा सुटिङ सकियो। सुटिङ दौरान लोकेसन, ग्राफिक्स, कन्सेप्टमा श्रृंखलाले निकै चासो राखिन्। उनमा आफूले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको अभिन सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘दिदीमा देशलाई चिनाउन मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पायौँ। उहाँसँग काम गर्न पाउँदा हामीलाई पनि निकै खुसी लाग्यो।’
सुट गरेको एक महिनापछि भिडियो तयार भयो। इडिटिङ गर्ने सबै जिम्मेवारी अभिनको टीमको थियो। श्रृंखलाले चीन जानुभन्दा एक दिन अघि मात्र भिडियो हेर्न पाइन्। समय कम भएकाले निकै हतारमा भिडियो बनाएको उनी बताउँछन्। ‘दिदीलाई मन पर्ने हो वा होइन, कस्तो बन्यो भन्ने लागेको थियो’ अभिन भन्छन्, ‘तर उहाँले निकै राम्रो लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अरुहरुले पनि रुचाइदिनु भएको छ।’
भिडियो भाइरल हुनुमा यसमा देखाइएको सुन्दर नेपाल नै मुख्य कारण हो। त्यसैले यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई सहयोग पु¥याएको छ। भिडियोमा देखिएको प्राकृतिक सुन्दरताले जो–केहीलाई पनि मनमोहित बनाउँछ ।
अभिन पनि आफूले बनाएको भिडियोले यतिधेरै चर्चा पाउँदा दंग छन्। ‘भिडियो कस्तो बन्यो भन्ने थियो तर पर्यटन प्रबद्र्धनसँग जोडेर चोतर्फी चर्चा पाएपछि भने नेपालका लागि केही गरेको अनुभूति भएको छ’, उनी सुनाउँछन्। भिडियोमार्फत श्रृंखलाले विश्वमा नेपालाई चिनाउने संकल्प लिएको र त्यो पूरा भएको अभिनको बुझाई छ।
यता श्रृंखलाले मिस वल्र्डमा प्रस्तुत गरेको परिचयात्मक भिडियोमा नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि सहयोग गरेको छ। बोर्डका सिईओ दीपकराज जोशी आफूहरुले प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा सहयोग गरेको बताउँछन्।
‘भिडियोबाट हामीले टुरिजम प्रमोसनमा केही सहयोग पुग्ने आशाका साथ उहाँलाई साथ दिएका हौं’ जोशी भन्छन्, ‘अपेक्षाअनुसार भयो। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताबारे बुझ्न यसले पक्कै पनि सहयोग पुर्याउने छ।’
यसले ‘भिजिट नेपाल– २०२०’ मा समेत सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ।
प्रकाशित १३ मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-11-29 20:44:03